UKUHLAMBA UMPHUNGA (IINGCAMANGO ZOYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Ukuhlamba umphunga (Iingcamango zoyilo lwegumbi lokuhlambela)
Ukuhlamba umphunga (Iingcamango zoyilo lwegumbi lokuhlambela)
Apha sabelana ngezibonelelo zeshawa yomphunga kubandakanya i-pros & cons kunye nemibono yoyilo lokuhlambela.
Indawo yokuhlambela umphunga yindlela efikelelekayo yokuphumla kubutofotofo bekhaya lakho kwaye inokuba nezibonelelo zempilo ezilungileyo kakhulu. Lusuku lwe-Spa oluchazwe ngokutsha.
Yintoni Ukuhlamba umphunga? Ishawa yomphunga yiglasi ebiyelweyo emileyo enikezela ngeempawu zokuhlambela ngaphandle kwebhafu. etywiniweyo ukuze ukufuma kungashiyi indawo yokuhlambela. Ishawa yomphunga isebenza emanzini abandayo agqitha kumgca wamanzi kwaye avelise ubushushu obumanzi ngejenereyitha yomphunga.
Isixhobo sokufudumeza umbane somvelisi emva koko sonyusa ubushushu bamanzi sibile kwi-118 degrees Fahrenheit. Umphunga ovela emanzini abilayo uhanjiswa ngombhobho ovela kumvelisi kwaye ukhutshelwe kwindawo yokuhlambela ngaphakathi kwentloko yomphunga ngaphandle kwengozi yokutsha.
Umphunga ovelisiweyo wenza indawo epholileyo, efudumeleyo kunye nefumileyo ebonelela ngethuba lokuphumla, ukuthuthuzela ezo zihlunu ziqinileyo kunye nokuvuselela imizimba ediniweyo ngaphandle kokuqhuba amanzi ashushu ixesha elide.
Kubalulekile ukumisela ubungakanani obuchanekileyo bokuvelisa umphunga kwindawo yakho yokuhlambela yomphunga. Umvelisi omncinci kakhulu kwisithuba sokuhlambela umphunga awuyi kudala amava omphunga ogqibeleleyo. Ukongeza, ukuba umvelisi mkhulu kakhulu, inokuba yinkcitho nayo.
IziBonelelo ngeShow Steam
Ixabiso leShower Steam
Iindleko zoMnyango weShawa esiTshayo kunye nokuBiyelwa kweGlasi
Ukufakwa kweTile Wall
I-Steam Shower Pros kunye ne-Cons
Wonke umntu kufanelekile ukuzonwabisa ingakumbi ekupheleni kosuku olude noludinayo- xa ufuna ukuphumla ezo zihlunu zibuhlungu kwaye unyibilike kwilifu elithozamisayo lomphunga; kunye nokuvela uziva uhlaziyiwe. Endaweni yokuba uye kwi-spa yezempilo, ungonwabela olu hlobo lokutofotofo kwikhaya lakho ngokuguqula imeko yakho yesiqhelo ishawa yangasese kwisitya sokuhlambela.
• Umphunga ukhuthaza ukujikeleza kwegazi . Ukufudumeza umphunga kunye nokwanda kokubila, kunceda ukuvula imithambo yegazi encinci kunye nokuphucula ukuhamba kwegazi okuhambisa ngokulula ioksijini emzimbeni kwaye kwehlise uxinzelelo lwegazi kwaye kugcine intliziyo isempilweni. Inceda nasekulungiseni izicwili zolusu ezaphukileyo.
• Umphunga ulungile kulusu lwakho . Ngokuvula ii-pores ezivumela ukukhutshwa komphunga wokubila kunceda ukucoca ulusu lwangaphandle njengoko lukhupha i-sebum ebanjiweyo. Ukufudumeza ulusu ngomphunga kuvula ii-pores ezivumela ukucoca ubumdaka, iiseli zolusu olufileyo, iibacteria kunye nokunye ukungcola okuvala ii-pores.
• Umphunga uhambisa isikhumba esomileyo kwaye uthambise ulusu . Ubushushu kunye nokufuma kunceda ekwandiseni ukuveliswa kweoyile okuthambisa ulusu ngokwendalo. Ikwakhuthaza ukuveliswa kwe-collagen kunye ne-elastin ekhokelela kulusu oluqinileyo nolukhanyayo. Umphunga ulungisa iifollic zeenwele ukuthambisa lula kunye nokwenza ukuba kube lula ukucheba.
• Umphunga uphungula izihlunu ngakumbi emva kokuzilolonga . Ubushushu obuvela kumphunga bungena bungene nakwizicubu zemisipha kwaye buncede ukunciphisa ukukhathazeka kwemisipha kunye nokunceda ukuthomalalisa ukuphela kwentliziyo.
• Unokunceda ukukhulula amalungu aqinileyo . Ukuzifudumeza ngokusebenzisa ishawa yomphunga phambi kokuzilolonga kunceda ukunqanda ukwenzakala kwaye kunceda ukukhulula amalungu aqinileyo akwenza ukuba ukwazi ukufikelela kubuninzi bokuhamba ngexesha lokuzilolonga.
• Umphunga unciphisa uxinzelelo . Ubushushu bubangela uxinzelelo ukuba lunyibilike, lwenze ukuba umzimba ukhulule ii-endorphins kunye nokunciphisa inqanaba le-cortisol ekwenza uzive ukhululekile kwaye uhlaziyekile. Inokukunceda ukukhuthaza ukulala okunzulu, ukuphumla kunye nokwandisa amandla okulala kwendalo.
• Umphunga unokunceda ekususeni ityhefu. Ishawa yomphunga inokunceda ukususa iityhefu emzimbeni kwaye ibonakalise ukunceda umzimba ulahle isodium engaphezulu. Ikhuthaza ukunciphisa imveliso yenkunkuma emzimbeni.
• Umphunga unceda ukuphucula impilo yakho yokuphefumla . Inika isiqabu kukuxinana kwizono kunye nemiphunga, inceda ukucacisa iipaseji zempumlo ezixineneyo kunye nokunceda ukukhulula ukuphuma kwencindi. Umphunga uthomalalisa umqala kwaye unokwenza njenge-expectorant yendalo. Umphunga ungasetyenziselwa ukunyanga umkhuhlane kwaye unokubonelela ngoncedo lwethutyana lweempawu zokuphefumla.
• Umphunga unokunceda ukunciphisa umzimba . Ishawa yomphunga inokunceda ukutshisa iikhalori ezongezelelekileyo kwiseshoni yemizuzu eli-15 kubushushu obungu-114 ° F ecaleni kokutya okusempilweni nokuzilolonga. Ukubila kunokuvuselela umzimba kunye nokunyusa impilo kunye nokulahleka kobunzima bamanzi. (Jonga ugqirha wakho malunga nempilo yakho kunye nexesha kwigumbi elinomphunga)
I-avareji yeendleko ze-prefab ye-steam yokufaka ishawa kwi-3 yeenyawo x i-3 x i-7 yeenyawo zokuvalelwa imalunga ne- $ 4,350. Oku kuza nomvelisi we-3-kilowatt ogqityiweyo nazo zonke izixhobo ezifanelekileyo ezixabisa i-3,810 yeedola. Ngapha koko, indleko zabasebenzi kufakelo zimalunga ne- $ 540, ebandakanya ukulungiswa kwesiza, ukudibanisa iyunithi, ukuhambisa imibhobho, ukudibanisa imibhobho kwindawo yakho yokuhambisa umbane kunye neengcingo zombane ezifuna ukubotshelelwa kwintambo yombane ye-220-volt kunye nolawulo lwedijithali.
Ngelixa ishawa yomphunga oqhelekileyo iya kubiza i-avareji ye- $ 4,000 ukuya kwi-14,200 yeedola; iindleko ziya kwahluka ngokuxhomekeka kubungakanani kunye neempawu zeshawari. Izinto ezibandakanya umbane we-steam zingaba phakathi kwama-3,000 ukuya kuma-8,200 zamaRandi. Iindleko zabasebenzi kufakelo kubandakanya iithayile, izixhobo zeglasi, imibhobho kunye nombane ngumbane ongezelelweyo weedola ezili-1 000 ukuya kwii-6,000 zamaRandi.
Kubalulekile ukuqaphela ubukhulu kunye nohlobo lweglasi ekufuneka isetyenzisiwe. Kucetyiswa iglasi enesiqingatha se-intshi okanye iglasi eshinyeneyo eyi-3/8-intshi. Iglasi ecacileyo ayibizi kakhulu kuneglasi yemvula. Ukuvalelwa kwindonga yeglasi kuya kubiza malunga ne-700 ukuya kwi-1,900 yeedola kwaye iingcango zeshawari zeglasi zibiza i- $ 500 ukuya kwi-1,300.
I-3 yeenyawo x 3 iinyawo x 7 iinyawo ezivaliweyo, indleko yokufaka i-12 nge-intshi ye-intshi ye-12 intshi iya kuba malunga ne-640 ukuya kwi-1,300 yeedola.
Iyunithi yejenereyitha enobunzima obuyi-90 ukuya kuma-450 yeenyawo zetyhubhu ene-4.5 ukuya kwi-12 yeekhilowathi iya kuxabisa malunga ne- $ 500 ukuya kwi-2,000 yeedola ngokuxhomekeke kumandla nakwivolumu. Kukho iipakeji ezikhoyo kwimarike ebandakanya iphaneli yokulawula, iivelufa zokukhupha uxinzelelo kunye neentloko zomphunga zizonke.
izipho zekrisimesi ezilungileyo zomfazi wakho
Kukwakho nezinye izinto zexabiso ekufuneka zithathelwe ingqalelo njengokukhanyisa, ulawulo, izixhobo, ukugungxula kunye nezinye izinto ezinje ngeenkqubo zesandi, indawo yokuhlala kunye nemithombo yeoyile ye-aromatherapy.
Iinkonzo zokuShower Steam - Njengoko kuchaziwe ngaphambili kweli nqaku, ishawa yeshawari inciphisa uxinzelelo, iphilisa umzimba wakho, yonga indawo kunendawo yokuhlambela esemgangathweni, yonga imali kunye nexesha. Ukuhlamba umphunga nako kuyanceda ekugcineni amanzi; ishawa rhoqo esebenzisa intloko yeshawari yokonga amanzi iya kusebenzisa iilitha ezingama-50 zamanzi xa isetyenziselwa imizuzu engama-20, kanti imizuzu engama-20 kuphela isebenzisa iilitha ezi-2 zamanzi.
Abathengi abaninzi basekhaya bacinga ngokuthenga amakhaya aneempawu zokugqibela, oko kuthetha ukuba ukongezwa kwemvula enkulu kuya kuba nokunyuka kwexabiso lokuthengiswa kwepropathi.
Ukuchitha usuku kwi-spa kuthetha iindleko ezongezelelweyo kwiifizi zobulungu kunye nexesha lokuhamba; Ngelixa ngokuzisa izinto ezifanayo ze-spa ekhaya, abaninimzi baya kuba nakho ukonwabela zonke izibonelelo zosuku lwe-spa ngaphakathi kwamakhaya abo. Uninzi lweendawo ezivalelweyo zine Iishawa ezineebhentshi oko kunceda ukuba ukhululeke kwaye uzonwabise njengendawo yokuphumla.
Iishawari zomphunga zisebenzisa indawo encinci kune-sauna okanye igumbi le-steam; Kwaye ngenxa yokuba ezi yunithi zincinci, kukho ukucoca okuncinci kunye nokugcinwa kwabanini bamakhaya.
Umphunga Shower Cons Kukho imingcipheko enxulunyaniswa nemvula yomphunga ekufuneka uyiqaphele ngaphambi kokuba uphume uye kuthenga ishawa yokuhlambela indlu yakho yangasese.
Ubushushu obuvela kumphunga, kunokubakho umngcipheko wokuphelelwa ngamanzi emzimbeni kwaye ke kuyacetyiswa kakhulu ukuba ungachithi ixesha elingaphezulu kwemizuzu engama-20 ngaphakathi kwendawo ebiyelweyo yeshawari. Kuyacetyiswa ukuba usele amanzi amaninzi ngaphambi kokungena kwisitovu sokuhlambela.
Ngenxa yobushushu obugqithisileyo abantu abaneemeko ezithile zonyango bayacetyiswa ukuba babaphephe njengabafazi abakhulelweyo, nabani na onesifo sentliziyo, abo baneqondo eliphantsi kakhulu okanye uxinzelelo lwegazi oluphezulu, abo banesifo seswekile, nabani na onesifo sokuwa, abo bathatha amayeza okubulala iintsholongwane kunye nabasebenzisi bokutshintsha kwengqondo. iziyobisi ezinje ngezikhuthazi, izinto ezizolisayo okanye utywala. Aba bantu akufuneki basebenzise iishawa ngaphandle kokubonisana nogqirha kuqala.
Iindidi ezithile zebacteria kunye neentsholongwane zingakhula kwaye zisasazeke njengosulelo lomngundo olunokuphumelela kwiimeko ezishushu nezifumileyo ngenxa yendawo efanelekileyo enikezelwa yivenkile yokuhlambela umphunga. Kuyacetyiswa ukuba xa ungaphakathi kwishawari yomphunga, nxiba itawuli kunye nezihlangu zeshawari.
Ngelixa ishawa yomphunga ngokuqinisekileyo igcina amanzi xa isetyenziswa, yonyusa ukusetyenziswa kombane njengoko ishushu ngamanzi ukuvelisa umphunga.
Vavanya kwaye uqwalasele ukuba uza kuyisebenzisa kangakanani ishawa yakho yemihla ngemihla kuba kungabizi mali ininzi ukuyifaka kwaye unokugqibela ngokuchitha imali engaphezulu kunokuba uza kuphuma kuyo.
Okokugqibela, ukuba awusebenzi neekhontraktha ezinamava zomphunga, kunokubakho zonke iintlobo zamanzi ezonakeleyo ezinxulumene nemicimbi yolondolozo enokubangelwa sisixa esikhulu sokufuma okuvela kwisitya sakho somphunga.
Kwinqaku lokuvala, ishawa yomphunga ihlala ityala imali eninzi kwaye inokunyusa ukulingana kwekhaya. Kodwa ingaphezulu kwe- a ishawa ebutofotofo Kuba umphunga ubonelela ngezibonelelo ezininzi zempilo kwaye unokuba yindlela efanelekileyo yokunyanga nokunyanga izifo ezininzi kuba umphunga uneempawu zokuphilisa. Iishawari zomphunga azifani nemvula eqhelekileyo; amava emva koko andisa ngaphandle kokuphumla kunye nokuphumla; kuphucula impilo yomntu ngokwasemzimbeni kunye nempilo yengqondo.
Ikhredithi eninzi iya kwitekhnoloji yale mihla yokwenza ukuba ube namava afana ne-spa kwaye ufumane izibonelelo zemvula yomphunga ngaphandle kokushiya intuthuzelo yekhaya lakho. Ukufumana umxholo onxulumene nokuhlambela jonga inqaku lethu malunga hamba uyilo lokuhlamba .
Iindawo eziphezulu zomtshato eFlorida
ezinye iilokhwe zomtshato kunye nobukhulu